Amaphayiphu we-tanker subsea abizwa nangokuthi ama-pneumatic valve, ama-pneumatic subsea valves, ama-valve okuphuthumayo kanye nama-valve okuvala okuphuthumayo. Njengoba kube nezingozi zokuphepha ezihamba ngesivinini esikhulu kanye nomhubhe zezimoto zezimpahla eziyingozi eChina ngonyaka we-2014, iminyango kahulumeni efanele iqinise i-supervis ...
1. Ngaphambi kokusebenza kwe-steamer, iphenyo yokulwa nokuchichima idinga ukususwa. Ngemuva kokuphothulwa kokusebenza komkhumbi futhi ithangi selipholile, lizobuyiselwa emhlanganweni omusha. 2. Ngaphambi kokusebenza kwe-steamer, i-plug fusible engezansi kwe-valve yasolwandle idinga ukususwa. Ngemuva ...
Iyini insimbi engagqwali? Ekuqondeni kwabantu abaningi, "insimbi engagqwali" iyinsimbi engeke igqwale, kepha amakhasimende amaningi akhiqiza izindawo zokugqwala lapho kuvela amabala ensundu (amabala) ansundu ebusweni bamaphayiphu wensimbi engagqwali. Siyini isizathu? Amaphayiphu wensimbi engagqwali anele ...
Ukuthi isibhamu sikaphethiloli elolini likaphethiloli singazivala kanjani kuncike kakhulu ekutheni ikamelo elinomshini lingakha igebe elanele. Ngakho-ke, lapho isibhamu esigcwalisa uphethiloli singeke sikwazi ukuzimela, kufanele sixazululwe ikakhulukazi ngokuya ngemibono elandelayo: